Shiinaha QF-JX-300 Shiinaha ICU Caafimaadka Kala-bixinta Buundada ee loogu talagalay soosaarayaasha Isbitaallada iyo alaab-qeybiyeyaasha. Wanyu
Buundada Caafimaadka Buundada
QF-JX-300 Shiinaha ICU Caafimaadka Kala-bixinta Buundada Isbitaalka
QF-JX-300 waxaa loola jeedaa bacda caafimaadka ee ICU, taas oo ah qalab gargaar caafimaad oo lagama maarmaan u ah qeybaha casriga ee ICU, inta badan ka kooban jir buundada, qeybta qalalan, iyo qeybta qoyan.
Qalabkan buundada caafimaad waxaa loogu talagalay laba qaab, qaybta qalalan iyo qaybta qoyan oo la isku daray ama la kala saaray.
Qaybta qoyan waxaa lagu qalabeeyaa qalab qalab lakabyo badan leh. Waxay ku qalabeysan tahay sirinjiye bamka saliida lagu rido iyo usha bamka faleebada. Qaybta qallalan waxaa lagu qalabeeyaa qalab lakabyo badan leh dhererkiisana khaanadda waa la hagaajin karaa.
Gaaska caafimaadka, nuugista, korontada iyo boosteejooyinka waxsoosaarka shabakada ayaa siday isugu xigaan loogu qaybiyay qaybaha qalalan iyo kuwa qoyan ee ay gaari karaan shaqaalaha caafimaadka.
1. Qolka Daryeelka Degdega ah
2. Wards oo dhan
3. Qolka Soo-kabashada
1. Qalab xoog badan
Buundada waxay ka samaysan tahay qalab daawaha aluminium ah oo aad u sarreeya. Waxay leedahay awood qaadid xoog leh.
2. Naqshadeynta Tareenka
Naqshadeynta tareenka isdaba-joogga ah waxay ka dhigeysaa dhaqdhaqaaqa munaaradda mid si habsami leh u socda, waxayna sidoo kale ka dhigeysaa shaqaalaha caafimaadka kuwo shaqaale badan badbaadiya
3. Hillaac Laydh jilicsan
Ilaha nalalka LED-ka waxaa lagu habeeyay alwaaxda buundada caafimaadka si loo siiyo jawi shaqo oo wanaagsan shaqaalaha caafimaadka.
4. Qaab dhismeed qaabaysan
Naqshadeynta qaabdhismeedka qaabdhismeedku waxay la kulmi kartaa baahiyaha cusbooneysiinta mustaqbalka oo ay u fududahay dayactirka.
5. Naqshadaynta Kala-soocidda Gaaska-korontada
Naqshadeynta kala-goynta gaaska-korontada waxay hubisaa isticmaalka aaminka ah
Qadka korontada iyo dhuumaha wax siiya hawada ma qalloocin doonaan ama kama dhacayaan shilka sababo la xiriira wareegga sinta.
6. Goobaha Gaaska ee Waara
Midab kala duwan iyo qaab isku xirnaanta gaaska si looga hortago isku xirnaan qaldan. Daabacaadda dugsiga sare, saddex gobol (oo daaran, iyo furka), in ka badan 20,000 oo jeer in la isticmaalo. Waa la ilaalin karaa iyada oo aan hawada la marin.
Dhererka buundada: 2200-3200mm
Dhererka dhaqaaq ee aagga qalalan: 550mm
Dhererka la dhaqaajin karo ee aagga qoyan: 550mm
Xagga wareegga aagga qalalan: 350 °
Xagga wareegga aagga qoyan: 350 °
Qaadista Awoodda buundada: 600kgs
Qaadashada Aagga aagga qalalan: 280kgs
Qaadashada Awoodda aagga qoyan: 280kgs
Waxay kuxirantahay baahiyaha
Vacuum Gaaska ka baxa
Sirinji Bamka Combinat hayayaashii
Hore: LEDD700 Nooca Saqafka LED Hal Gacan Hawlgal Nalal leh Kaamiro Video ah
Xiga: TS-DQ-100 Double Arm Electrical Medical Endoscopic Pendant oo ka socda Warshadda
TD-TS-100 Warshadda Tilmaamaha Bixinta Tooska ah ee Combi ...
ZD-100 ICU Waxaa loo Adeegsaday Jaangooyada Caafimaadka ee Hos ...